ဝယ်ထားရင် ဘယ်တော့မှမမှားဘူးလို့ ဆိုရမယ့် လက်ကိုင်အိတ် (၆) မျိုး
ကိုယ်မသုံးချင်တော့လို့ ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဝယ်ချင်သူတွေ အများကြီး....
အမျိုးသမီးလက်ကိုင်အိတ်တစ်လုံးဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ ရပါတယ်လို့ပြောရင် ယုံနိုင်ပါ့မလား? လက်ကိုင်အိတ်အချို့ဟာ အချိန်ဘယ်လောက်ပဲ ပြောင်းလဲသွားပါစေ ခေတ်နောက်ကျသွားခြင်းမရှိဘဲ အမြဲတမ်း လိုလားတောင့်တခံနေရကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအိတ်တွေဟာ ကိုယ်မသုံးချင်တော့လို့ ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဝယ်ချင်သူတွေ အများအပြားရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖက်ရှင်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ယခုဖော်ပြမယ့်အိတ်တွေကို ဝယ်ထားပြီး နောင်တစ်ချိန် ပြန်ရောင်းမယ်ဆို အရှုံးမရှိနိုင်ဘူးလို့ ပြောနေကြပါတယ်။
၁။ Celine Box Bag
Céline အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အိတ်ကလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Céline အမှတ်တံဆိပ် လက်ကိုင်အိတ်စာရင်းမှာမှ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပခုံးမှာချိတ်မလား၊ လက်ကိုင်အိတ်ပဲလုပ်မား ဒါမှမဟုတ် စလွယ်သိုင်းမလား? ဘယ်လိုထားထား ကြည့်ကောင်းတဲ့ ချစ်စရာအိတ်လေး တန်ဖိုးအားဖြင့်တော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၉၀၀ အထက်မှာ ရှိပါတယ်။
၂။ Chanel Classic Flap Bag
Chanel လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မသိသူမရှိလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒီအိတ်ကလေးကိုလည်း မကြာခဏ မြင်ဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေမှာမဆို အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလို့လည်း ဖက်ရှင်ဂုရုတွေက မှတ်ချက်ချထားကြလေရဲ့။ Baghunter ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အဆိုအရ ဒီအိတ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကစပြီး ၇၀% မြင့်တက်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အိတ်ကို ဆိုဒ်လေးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ပြီး ဆိုဒ်သေးအိတ်တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၄၇၀၀ အနည်းဆုံးရှိကာ ဆိုဒ်ကြီးအိတ်ကတော့ တစ်လုံးကို ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ နဲ့အထက်ပါပဲ။
၃။ Christian Dior Lady Dior Bag
၁၉၉၄ ခုနှစ်တုန်းက ဒိုင်ယာနာမင်းသမီးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Lady Dior အိတ်ကလေးဟာ ယနေ့ထိလည်း လူကြိုက်များနေဆဲပါ။ မူလနာမည်က 'chouchou' (ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် အနှစ်သက်ဆုံးဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်)လို့ ပေးခဲ့တာပါ။ ဒိုင်ယာနာက ဒီအိတ်လေးကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အိတ်ကို ဆိုဒ်သုံးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၂၉၅၀ ပေးရပါလိမ့်မယ်။
၄။ Hermès Kelly Bag
Hermès ရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက အမြဲတမ်းခေတ်မီနေတာ အံ့သြစရာပါ။ သူ့ကို ကိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ တက်ကြွငယ်ရွယ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အိတ်တစ်လုံးကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ၂၅ နာရီအထက် ကြာမြင့်တာမို့ ဝယ်ချင်သူတွေက ကြိုပြီးမှာထားမှ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အိတ်တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၈၄၀၀ အထက် ပေးရတာလည်း မဆန်းပါဘူး။
၅။ Prada Galleria Bag
Prada ရဲ့ Galleria Bag ကို Saffiano Lux bag လို့လည်း သိကြပါတယ်။ Prada ကို တည်ထောင်သူ မာရီယိုပရာဒါကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းပါ။ သားရေအကောင်းစားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမို့ တော်ရုံအပူဒဏ်ကိုလည်း ခံနိုင်ပါတယ်။ ပွန်းပဲ့တာလည်း သိပ်မဖြစ်ဘဲ ရေစိုဒဏ်လည်း ခံပါတယ်။ ရုံးတက်တဲ့အခါ ကိုင်ကြတာများပါတယ်။ ဆိုဒ်မျိုးစုံရှိပြီး အနည်းဆုံးဈေးကတော့ အိတ်တစ်လုံးကို ဒေါ်လာ ၁၂၉၀ ပေးရပါလိမ့်မယ်။
၆။ Fendi Peekaboo Bag
Fendi ရဲ့ Peekaboo အိတ်ကလေးဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကမှ စတင်ရောင်းချခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ငါးနှစ်အကြာမှာတော့ အရမ်းကို လူကြိုက်များလာခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအိတ်လေးကိုတော့ ကမ္ဘာ့ဖက်ရှင်အကျော်အမော်ကြီး Karl Lagerfeld က ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အိတ်တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးက အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁၅၅၀ ရှိပါတယ်။